कथा: छोरीको जिन्दगी - dsnews
★ दिपा धिताल★
निता भर्खर सोह्र वर्षमा लागेकी थिई घरमा उसको बिहेको कुरा चलाइयो, उसले भनी म अँझै बिहे गर्दिन म धेरै पढ्न चाहन्छु । निताको कुरा सुनेर उसका बाबा आमाले भने – छोरी मान्छे बिहे गरेर जानुपर्छ उमेर पुगेपछि माइतीमै बस्यो भने समाजले कुरा काट्छ तैले अब बिहे गरेर जानैपर्छ । के गरोस निता निकै सोझी मान्छे उसले आफ्ना बा आमाको कुरालाई नकार्न सकिन र ऊ नचिनेको मान्छेसँग बिहे गरेर पराई घरमा गई । पहिला त उसलाई राम्रै भयो पराई घरमा तर समय वित्दै जादा उसको जीवनमा आधिबेहरीले घेर्ना थाल्यो उसले जवरजस्ती पन्छ्याउने कोसिस गरी तर के नै लाग्थ्यो र निर्दोष जननीको । जीवनभरी सँगै जिउने सँगै मर्ने बाचा कसम खाएर अग्नी साक्षी राखेर बा आमाले नै कन्यादान गरी दिएको जीवनसाथी नै घाती, बर्वादी भएपछि कसको के नै लाग्छ र ? शायद निताले पहिले नै उसको बानी व्यवहार थाहा पाएको भए उसले बिहे नै गर्ने थिइन । फेरि उसले कहाँ गरेकि होर उसका बा आमाले जबरजस्ति गराइदिएका हुन् उसको बिहे ।
बा आमा पनि किन यति निष्ठुरी बन्छन् ? किन छोरीहरूलाई पराई घरमा मात्र जाने जात हो भनेर छोरीहरूका इच्छा चाहनाहरू बुझ्दैनन् ? पराई घर कस्तो छ ? छोरीको जीवन साथीको बानी व्यवहार कस्तो छ ? नबुझेरै धनी हुनेखाने छ भनेर किन हुत्याउछन् छोरीलाई ? फेरि छोरीको भविष्य नहेरेर धनको पछि मात्र किन लाग्छन् ? किन समाजको पछि लाग्छन् ? यो समाजले पनि छोरी माथि नै किन औला ठड्याउछन ? के छोरीलाई पनि स्वतन्त्र रुपमा हिड्न पाउने अधिकार छैन ? यावत प्रश्नहरूको जवाफ दिने को छ ?
कोही पुरुषहरू किन यति दानवभन्दा भयानक बन्छन् । पुरुषको मात्र के कुरा गरौँ कति महिलाले महिला माथि नै क्रुर व्यवहार किन देखाउछन् । एउटी नारीलाई अर्की नारीले दिनु पर्ने जुन साथ सहयोगको सट्टा किन शत्रुताको व्यवहार देखाउछन् । निता लोग्नेको मात्र सिकार नभएर घरकै अामाजु सासूको व्यवहारबाट पनि निकै पीडित भइसकेकी छ । ऊ राम्रोसँग निदाउन पनि पाउदिन । निदाउनु त के पेटभर खान पनि पाउदिन ।उसको अामाजु नन्द सासूले नै उसलाई पेटभरी खान पनि दिदैनन् । बरु कुकुर भुक्यो भने कुकुरले खाना पाउँछ तर त्यस घरमा निताले पेटभर खाना पाएको दिन कहिल्यै छैन । त्यसलाई काममा मात्र जोताइन्छ । एकदिन त ऊ मर्न भनेर डोरी बोकेर जङ्गलतिर जान्छे मर्न भनेर रुखको हाँगामा डोरी झुन्ड्याएर घाँटिमा के बेर्न थालेकि हुन्छे ठिक त्यसैबेला कसैले देख्छ र उसलाई बँचाउँछ । त्यसबेला मृत्युले पनि देखेन अन्धो भएछ क्यारे निता बोल्छे । आखिर निता किन त्यो सब सहन बाध्य हुन्छे । के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ ? निताको कथा । किनकि नितालाई माइतिको डर छ । घर गरेर खाना नसक्ने अल्छी भनेर, समाजको डर छ लोग्ने सासूका मुखामुख लाग्छे घर गरेर खाना सक्दिन भन्छन् कि भनेर । त्यसैले ऊ चुपचाप त्यो सब सहन बाध्य हुन्छे ।
निताले लोग्नेको उपचार गर्दा कारेको ॠण धेरै छ तिर्नुपर्ने, कसरी तिर्ने ? ऊ बहुला जस्ती हुन्छे । उता छोरालाई पढाउनुछ उपचार गर्दा लागेको ॠण तिर्नुछ । माइतीमा दिदीबहिनी दाजुभाइ बा आमा सबैबाट ऊ घृणित भइसकेकी छ । मोमाइलमा घन्टी बज्छ पटक पटक उठाउछे ॠण लगेको तिर्ने होइन ? कहिले हो तिर्ने ? अरुको रिन खान मजा आउछ के हो ? तिर्ने भए तिर्ने नत्र…….नाना थरीका आरोप अश्लील शब्द । एउटी दुखी असहाय एकल नारीलाई बोल्नु र गर्नुपर्ने व्यवहार कत्ति पनि छैन । पैसा मात्र जिन्दिगी सम्झनेहरूले यसै बोल्छन् । निता चुपचाप सहन बाध्य हुन्छे । सिपाही भएको कारण लोग्नेको पेन्सनले उसले सके जति ॠण तिरेकै छे तर पनि पुगेको छैन । उसलाई जसरी नि ॠण तिर्नुछ ।आजभोली ऊ एउटा बोर्डिङ स्कुलमा केटाकेटीलाई हेर्ने खाना पकाउने भाँडा मिस्ने काम गर्छे । स्कुलले पनि उसलाई हेरेको छ, छोरालाई निसुल्क पढाइदिएको छ । निता निकै सोझी छे । जे जस्तो भए पनि ऊ सहेरै बसेकी छ अलि अलि गर्दै ॠण तिरेकै छे ।
Previous मनोबिश्लेषणात्मक कथा : उ र मेरो दोष !!
Next आमाको मुख हेर्ने दिन आमा गुमाउँदा
आमाको मुख हेर्ने दिन आमा गुमाउँदा